ICovey Hill Cottage
Ukuhlala kwamaphupha kwindalo, iCovey Hill chalet yindawo yoxolo yokwenyani. Le ndawo yokuhlala yokhuni ebanzi yakhiwe entliziyweni yehlathi kwindawo yangasese ekhangayo, kude nengxolo yempucuko kunye nokubukeka.
Iifestile ezinkulu zikuvumela ukuba ujonge imbonakalo ekhethekileyo yendalo ekungqongileyo. Kundivuyisa ukushushubeza yi esitovini iinkuni ebusika, okanye, ngexesha ehlotyeni, ukwenza ngaphandle umlilo okanye ukutsiba echibini lokuqubha ... qiniseka yeegesi ngexesha ebusuku zakho kunye nosapho kunye nabahlobo!
I-terrace enkulu yangaphambili yeyona ndawo ifanelekileyo yee-BBQs unyaka wonke. Indawo ye-spa enokuhlala ukuya kuthi ga kwi-6 abantu ikwamema ukuba uphumle.
Ngamagumbi okulala ama-3 atofotofo, le ndawo inokuthatha abantu abayi-10. (okanye ngaphezulu) Igumbi lokuhlambela kunye negumbi lokuhlambela eligcweleyo likwakhona, phakathi kwezinye izinto: ibhafu yabantu aba-2 kunye neshawa eyahlukileyo.
Ikhitshi likwakuvumela ukuba ulungiselele ukutya okumnandi enkosi kumaziko ayo anamhlanje afanele umpheki kuwe!
Nokuba sikusapho, isibini okanye abahlobo, le yeyona ndawo ifanelekileyo yokuba ufumane amaxesha ongalibalekiyo okuphumla kunye nolonwabo!
I-Covey Hill chalet ikwithambeka elingasentla lentaba edumileyo enegama elinye, kufutshane neHemmingford, eMontérégie. (malunga nemizuzu engama-45 ukusuka eMontreal) Akukho mfuneko yokuba uqhube iiyure ukonwabela eli khaya lifudumeleyo eliya kukutsala ngokuqinisekileyo!
Akukho foto inokunika ixabiso elifanelekileyo kubo bonke ubuhle bendawo.